दिर्घकालीन नीति नबनाएसम्म माला लगाएर घुमाउदैमा उत्कृष्ट नतिजा आउदैन : श्रेष्ठ « Kathmandu Television HD
दिर्घकालीन नीति नबनाएसम्म माला लगाएर घुमाउदैमा उत्कृष्ट नतिजा आउदैन : श्रेष्ठ
नविन कुमार श्रेष्ठ, नेपाल तेक्वान्दो संघका सचिव । खेलाडीको रुपमा सफल जिवन पछि प्रशिक्षक जिवन र रेफ्रि जिवनमा उत्तिकै सफलता पाएका नविनले हालै बेलायतमा भएको तेक्वान्दाको बिश्व च्याम्पियनसीपमा पनि रेफ्रिको भुमिका निर्वाह गरेका थिए । उनै नविनसंग नेपाली तेक्वान्दोको विविध पक्षबारे गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप
बिश्व च्याम्पियनसीपको अनुभब कस्ता रह््यो ?
म यस भन्दा अघि एसियाड र एसियन च्याम्पियनसीपमा संलग्न थिए । तर, बिश्वच्याम्पियनसीपमा सबै स्तरीय खेलाडी र अनुभबी खेलाडी भएको कारण धेरै फरक पाए । हाम्रो सामान्य गल्तीले पनि नराम्रो दुर्घटना हुन सक्थ्यो । नियममा पनि हरेक समय परिवर्तन भएको नै हुन्छ । यस च्याम्पियनसीपमा पनि थिए । यसकारण हरेक प्रतियोगितामा आफूलाई अपडेट गर्नु जरुरी थियो । त्यो यहाँ पनि रह्यो । रेफ्रि कमिसनको प्रमुख पनि फरक प्रतियोगितामा फरक ब्यक्ति हुने हुदा सञ्चालन शैली केही भिन्नता हुनु स्वभाविक हो । बिश्व तेक्वान्दो कता गएको छ? एसिया कहाँ छ ? र हामी दक्षिण एसियाली कहाँ छौ ? भन्ने पनि भन्न बुझ्ने अबसर पाँए । हाम्रा कमी कमजोरी र अन्य देशका खेलाडीका बारे पनि थप जानकारी रह््यो ।
नेपाली तेक्वान्दोको स्तर विगत देखि नै खस्कदै आएको हो । गत एसियाड र यस बिश्व च्याम्पियनसीपमा त हाम्रो प्रदर्शन अझ खराब रह््यो कारण के होला?
हामी आफ्ना कमजोरी पनि होलान् । खेलकुद परिषद्ले दिनु पर्ने सुबिधा पनि कम दिएको होला । हामीले आफ्ना खेलाडीलाई मनोबल बढाउन पनि नसकेको होला । अन्य देशले प्रगती गर्दै जादा हामी यथास्थानमा रह््यौ । गएको एसियाडको प्रदर्शनको समिक्षा गर्दै अर्को एसियाडको तयारी गर्दा राम्रो हुन सक्थ्यो । अरुलाई दोष दिने भन्दा पनि सबैले आफ्नो काम गर्दा समस्या हुदैन थियो । जिम्मेवार निकायले पनि तेक्वान्दोको चासो दिदा राम्रो हुन्थ्यो । खेलकुद परिषद्ले हामीलाई सोध्दा पनि सोध्दैन । हामीले पनि समयमै सबै तयारी गर्न सकेनौ । यो सबैको कमजोरी हो भन्ने लाग्छ । खेलाडीकै कुरा गर्दा हामी खेलाडी हुदाँ बेरोजगार थियौ । एकाध बाहेक अहिलेका राष्ट्रिय खेलाडी सबै जागीरे जिन्दगी विताउछन् ।
खेलकुद परिषद्ले लामो समयको एउटा निती ल्याउनु पर्ने होकी । राष्टिय खेलाडीलाई एक स्थान र नयाँ खेलाडीलाई सुरुवातमै फीजीकल पाटो समेत हेरेर अर्को स्थानमा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो । फीजीकल्ली फिट भएका खेलाडी चयन गर्दैचार बर्षे प्रशिक्षण योजना बनाउदा राम्रो होला । यसै शैलीले गर्दा राम्रो नहोला । साच्चै फीजीकल्ली फिट भएका खेलाडीको छनोट अति आबस्यक छ ।
तेक्वान्दो आफै सम्पन्न छैन र ?
धेरै सम्पन्न देखिन्छ । तर, खासै लगानी देखिदैन । डोजाङ प्रमुखले जम्मा गरेको पैसा र ग्रेिडिंगको पैसाले मात्र हाम्रो खेल चलेको छ । राखेपको निती पनि भएन । एसियाडमा रजत पदक जितेको खेलले अर्को पटक स्वर्ण जित्न के गर्नु पर्छ ? भन्ने निती सरकारले बनाएको भए यत्ति नराम्रो अबस्था हाम्रो हुदैन थियो । जसरी तेक्वान्दोको बारे सरकारका बेवास्ता रहदै आयो । अहिले सफलता पाउने प्याराग्लाइडिङको पनि अबस्था त्यही छ । केही दिन प्रशंषा गरेर, दुइ चार लाख रुपैयाले सम्मानीत गरेर र माला लगाएर घुमाउदा मात्र त्यही नतीजा निरन्तर हुने सम्भावना नै रहदैन । दिर्घकालीन निती त सरकारले बनाउनु पथ्र्याे ,त्यो बनाएन । संघले पनि प्रतिबद्धता सहित सुबीधा माग गर्नु र्पथ्यो । त्यो हुन नसकेको हो ।